Newa Times : देह व्यापार रमाइलोका लागि
यौन व्यवसायी महिलाहरूसँग यौन व्यवसायमा लाग्नुको कारण सोध्दा उनीहरूको सटिक जवाफ हुने गर्दछ– आर्थिक वाध्यता । यद्यपि उनीहरूको आर्थिक वाध्यता मात्र यौन व्यवसायमा लाग्न प्रेरित नगरेको यस लेखकको ठम्याई छ । अर्थात, आर्थिक वाध्यता मात्र नै सबै कुरा नभएको देखिएको छ । दाङ, कैलाली, बाँके, चितवन, सुनसरी, सिराहा, जस्ता जिल्लाका थुप्रै यौन व्यवसायीहरूसँग भेटेर कुरा गर्ने क्रममा यो कुरा खुलेको हो । रमाइलोका लागि गरिने एकाध पटकको सम्पर्क यौन व्यवसायीको बन्ने प्रमुख आधारको रुपमा पनि देखिएको छ ।
दाङकी रेखा रमाइलोको लागि यौन सम्पर्क गरिन् । उनी काठमाडौं बस्दाका क्रममा पहिलोपटक सम्पर्क गरेका व्यक्ति सैनिक थिए । ती सैनिकले आफँलाई सन्तुष्ट तुल्याएवापत रेखालाई पाँच हजार दिए । यही पाँच हजारबाट शुरु भयो, रेखाको यौन व्यवसाय । यसपछि उनले फर्केर हेरिनन् । त्यति बेला विद्यालय जाँदाको ड्रेसमैं यौन व्यवसायका लागि जाने गर्थिन भने रात गुजार्नुपर्दा साथी कहाँ गएको भनेर परिवारलाई भन्ने गर्थिन् । ती सैनिकबाट पाँच हजार पाएपछिको दिन सम्झदै उनले भनिन्, –आर्मीको ठँलै मान्छे रहेछन् । धेरै पैसा दिएपछि पैसा पनि हुने रमाइलो पनि हुने हुनाले यो काम गरें । उनले अगाडि भनिन्– त्यसपछि मैले सानोतिनो मान्छेलाई हेर्दै नहेर्ने भएँ ।
यौन व्यवसायी बन्ने क्रममैं उनले आफ्ना एक ‘ग्राहक’लाई श्रीमानको रुपमा पाइन् । हाल उनको एक छोरा एक छोरी छन् भने श्रीमान खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका छन् । उनले एक गैरसरकारी संस्थाबाट तालिम तथा ऋण लिएर पसल थापेकी छन् तर त्यो पसलमा मात्र उनी सीमित छैनन् । उनी अहिले पनि यौनकर्मीको रुपमा काम गर्छिन, मात्र रमाइलोका लागि ।
दाङकै ३१ वर्षिय बिमला पनि यौन व्यवसाय गर्दा सन्टुष्टि पाइने र मजबुरीको कारण पनि यस क्षेत्रमा लागको बताउँछिन । जनयुद्धका क्रमा श्रीमान बितेपछि यो पेशमा लागेकी बिमला आजकालका युवाहरुमा अप्राकृतिक मैथुन गर्ने शोखलाई भने मन पराउँदिनन् ।
विमला र रेखा मात्र होइन, थुप्रै महिलाहरू यौन व्यवसाय रमाइलोका लागि पनि गर्छन भन्ने कुरा चितवनको एक घटनाले पनि स्पष्ट पार्छ । चितवनकी शरिता २२ वर्षको हुँदा उनको श्रीमानको मृत्यु भयो । श्रीमानको मृत्युपछि उनी शारीरिक सन्तुष्टिको लागि भौंतारित थालिन् । एक साथी मार्फत उनले थुप्रै पुरुषहरू भेट्टाइन् पनि । पुरुषहरूबाट यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्न उनी आफैं खर्च गर्थिन्, खानपिन र घुम्नको लागि । आफ्रँले यौन व्यवसायीको रुपमा छु भन्ने कुराको उनलाई हेक्का आफँले काम गरेको चार महिनापछि मात्र महसुस भयो । यो चार महिनाको दौरानमा शरिताले यौन कार्य गरेवापतको पैसा उनको ग्राहक जुटाई दिने साथीले लिने गरेको कुरा खुल्यो । यसपछि उनले सोचिन, यौन कार्य गरेपछि त रमाइलो पनि हुँदो रहेछ, पैसा पनि पाईदो रहेछ भने यहि काम किन नगर्ने ?
कञ्चनपुर सप्तरीकी २३ वर्षिया संगिता पनि रमाइलो गर्न, शारीरिक सन्तुष्तिको लागि यौन व्यवसाय गर्छिन । श्रीमान कामको लािग दिल्ली गएका छन् । यसैले पनि उनी आफ्ना ग्राहकलाई घरमै ल्याउँछिन । कहिलेकाहीं बाहिर पनि जान्छिन् । जेठाजु सासुले शंका गरेर अरु केटा मान्छे घरमा नल्याउनु भन्ने सल्लाह दिन्छन् उनलाई तर जेठानी र उनी मिलेरै सो काम गरेको हुँदा उनले यो काम छोडेकी छैनन् । विगत ४ वर्षदेखि यौन व्यवसाय गर्दै आएकी उनी भन्छिन्– ‘थाहा पायो भने घरबाट निक्लिनु पर्ने हो कि ?’
यस्तै झापाकी वन्दना सुनसरीको एउटा रेष्टुरेन्टमा बसेर यौन व्यवसाय गर्छिन् । उनका ग्राहक भनेको उच्चतहका सुरक्षाकर्मी हुन् । पढ्दापढ्दै प्रेम विवाह गरेर सुनसरी आएकी बन्दनाले आफँले एक कारखानामा काम गर्ने बताएर आएकी थिइन । घरकी कान्छी छोरीले काम गर्नु पर्दैन घरमै आउनँ भन्दा पनि यस क्षेत्रमा पाउँदै आएको रमाइलोको कारण छोड्न सकेकी छैनन् । खाडी मुलुकमा काम गर्न गएका श्रीमानले वास्ता नगरेपछि श्रीमानलाई सवक सिकाउने हिसावले पनि व्यवसायमा लागको उनले बताइन् । भन्छिन्– अब ऊ फर्किए पनि संगै बसिन्न होला ।
विभिन्न ठाउँमा यौन व्यवसाय गर्दै आएका यी महिलाको भनाईले पनि यौन व्यवसाय आर्थिक वाध्यता मात्र होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यी यौन व्यवसायी आफ्नो शारीरिक सन्तुष्टिको लागि लागेको भनेर स्पष्ट बोल्छन् । लाहानकी ४५ वर्षिया सावित्री त एक कदम अगाडि बढेर बोल्छिन् । मानिसको प्रत्येक अंगको काम हुन्छ, आर्थिक उपार्जनमा लगाइन्छ । यौनाङ्ग पनि त्यत्तिकै किन राख्ने भन्ने उनको मनसाय देखिन्छ । उनी भन्छिन्– यो.......... बिग्रने, खिइने होइन, राखेर के गर्ने ? नँन, तेल त आउँछ ।
रमाइलो, सन्तुष्टि, कामै नगरी पाइने ठँलो रकमलाई यस व्यवसायको आकर्षणको रुपमा लिने गरिएको छ । आर्थिक वाध्यताले लागेको भन्ने यौन व्यवसायी महिलालाई सीपमँलक कामको तालिम तथा व्यवसाय गर्न रकम उपलब्ध गराउँदा पनि ती महिलाले यौन व्यवसाय नछाडेबाट पनि आर्थिक वाध्यता मात्र होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । साथै सानै उमेरमा गरिने अपरिपक्व प्रेम विवाह, रुमानी सपना, फेशन अनुकुल चल्नु पर्ने इच्छा आदिका कारण पनि सानै उमेरदेखि युवतीहरु यौन व्यवसायमा लागेको पाइन्छ । यी यौन व्यवसायीहरू एकै ठाउँमा बस्दा असुरक्षा हुने हुँदा साथीहरूकै सम्पर्कमा समय समयमा विभिन्न क्षेत्रमा फैलने गर्दछन् । एक ठाउँको यौन व्यवसायी अर्को ठाउँमा जाने कार्यलाई उनीहरू ‘माइत जाने’ भन्ने गर्छन । नेपालगञ्जका यौन व्यवसायीहरू त भारतको लखनउसम्म पनि आउने जाने गर्दछन् ।
देहव्यापार रहर हो कि वाध्यता भन्ने विवादको विषय हुन सक्छ । आर्थिक समस्याका कारण आफूहरू यस क्षेत्रमा आउनु परेको भनिए पनि थुप्रै महिलाको व्यवहार हेर्दा यसमा वाध्यताभन्दा रहर नै बढी देखिन्छ ।
गाउँबाट आएको र सुरुमा रेष्टुरेन्टमा काम गरेको, कसैले धोका दिएको, जस्ता कथाहरू बनाएपनि तीमध्ये धेरैसँग रेष्टुरेन्टमा काम गरेको अनुभव पनि नहुने भेटियो । घरपरिवारमा बसिबसी नै यौन व्यवसाय गर्ने थुप्रै महिला छन् । भेटिएकामध्ये कति त गाउँबाट काठमाडौं आउदा नै यस पेशामा लाग्नु पर्ने मानसिक तयारीमा आएका हुन्छन् ।
काम गर्न गा¥हो लागेकोले यस क्षेत्रमा आएको भन्नेहरूको कामका बारेमा बुभ्mदा पनि यस कुराको पुष्टि हुन्छ । जुन काम गा¥हो र कम पैसा आउने भएकोले देहव्यापारमा लागेको भनिन्छ त्यही काम गरेर साधारण जीवन बिताइराख्ने महिलाहरू थुप्रै भेट्टाउन सकिन्छ । आफँ बदनाम भइसकेको र यस्तो अवस्थामा काम पाउन मुस्किल हुनेहुँदा ‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु जाती’ भनेर देहव्यापारमा लागेको भनेर गरिने तर्क पनि मिल्ने देखिन्न । वल्लो घर र पल्लो घर त के एकै छानामुनी बस्नेबीच नै चिनजान वा चासो नहुने काठमाडौं तथा अन्य शहरी क्षेत्रको व्यस्त जीवनमा ‘बदनाम’ भन्ने कुरा बहानामात्रै हो । वर्षौदेखि देहव्यापारमा संलग्न कोही महिला यदि यो काम छाडेर साधारण जीवन बिताउने मनसायले हिड्ने हो भने सजिलै स्थापित हुनसक्ने वातावरण काठमाडौंमा प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ । यो काठमााडैंमा मात्र लागँ हुने कुरा पनि होइन । नेपालमा बसाईसराई व्यापक भइरहेको अवस्थामा व्यवसाय परिवर्तन सजिलै गर्न सकिने कुरा हो । यौन व्यवसायमा लागिसकेकाहरू यस क्षेत्रलाई भन्ने बेलामा ‘नर्क’ को संज्ञा दिने गर्छन् तर यसबाट उम्कने चाह भने नराख्नु त्यो ‘नर्क’को आकर्षण नै हो ।
(साभारः हसना म्यागेजिन)